Gaariga Apple ma imaan doono ilaa 2025 sida uu sheegayo Ming-Chi Kuo | Waxaan ka socdaa mac
Gaariga Apple ma imaan doono illaa 2025 sida uu sheegayo Ming-Chi Kuo
Horaanba idiinku sheegnay in ay noo muuqatay in sanadka 2021 uu noqon doono sanadka lagu jiro wararka xanta ah ee ku saabsan gaariga Apple way sii adkaan doonaan. Waxaan horey uga hadalnay falanqaynta ay shirkadaha maaliyadeed ee waaweyni sameeyeen hadana waxaan haynaa nala saadaalinta falanqeeyaha ugu caansan dhamaan. Sida laga soo xigtay Ming-Chi Kuo, gaariga Apple Ma imaaneyso illaa 2025 ugu horreyn.
Saadaasha cusub ee falanqeeyaha ugu caansan ee arrimaha Apple, ayaa ka digaya in Bisadda Apple aysan suuqa ku dhufan doonin ugu yaraan illaa 2025 iyo ugu horreynba. Ming-Chi Kuo wuxuu sheegayaa weli waxaa jira faahfaahin badan oo la safeeyo, si loo sii daayo sanadkaas ka hor.
Warbixin silsilad sahay ah ayaa sheeganeysa in dhowr warshadood oo ka mid ah qaybaha gawaarida ee Taiwan ay soo saarayeen shixnado Apple. Sidaa darteed, soosaarida suurtagalka ah ee gaariga korontada ee Apple wuxuu noqon karaa bisha Sebtember 2021. Xaqiijinta warbixin shaki waxay umuuqataa inaysan macquul aheyn sababo dhowr ah, oo udhaxeeya gawaarida la'aanta qeexitaano adag oo qeexan ilaa waqtiga u muuqda hogaaminta gaaban ee soo saarida waxsoosaarka baaxadaas.
Ming-Chi Kuo waxay cadeyneysaa in taariikhahaani ay yihiin wax aan macquul aheyn, macquul aheyn, maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo dabacsan oo wali jira iyo Sebtember 2021 waa muddo aad u gaaban mashruuc baaxad weyn leh.
Lama hubo jiritaanka alaab-qeybiyaha dhabta ah ee amarka noocan ah. Sidoo kale ma jiro barnaamij lagu daah furayo, sidoo kale lama maqal tilmaamaha gaar ahaaneed ee gaariga. Sidaa awgeed haddii wax waliba hagaagaanMa noqon laheyn illaa 2025 markaan bilaabi karno inaan aragno suurtagalnimada jiritaanka gaariga Apple ee waddooyinka. In kasta oo ay run tahay taas waxaa jiray hadal hayn ku saabsan daahfurka sanadka 2024.
Tesla hadda wuxuu heystaa waqti ku filan oo lagu hagaajiyo gawaarida jirta iyo Apple si loo hagaajiyo wixii horey u jiray iyo bilow wax run ahaantii hal abuur leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Gaariga Apple ma imaan doono illaa 2025 sida uu sheegayo Ming-Chi Kuo
Kudar baaqyo caam ah trackpad iyo jiirka leh barnaamijka Multitouch
Habeenkii ciyaarta Woods, waa bilaash wakhti xadidan